သောသီခို: တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကို တပ်မတော်တွင် ပြန်လည် ခန့်အပ်မည်ဟုဆို
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကို တပ်မတော်တွင် ပြန်လည် ခန့်အပ်မည်ဟုဆို
ဦးအောင်မင်းပြောတာ အကုန်လုံးလွယ်လွယ်လေးပဲ...ဟုတ်သလိုလိုနဲ့မူရင်းဇာတိက စကားအသွားအလာမှာပါသည်။ အစိမ်းရောင်ဖြင့် Highlight ပြထားပေးသည်။
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များကို တပ်မတော်တွင် အရည်အချင်းအလိုက် ပြန်လည် ခန့်အပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောကြားသည်။
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရာတွင် အပစ်ရပ်ရုံ၊ လက်နက်ချရုံ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးအရ အဓိက ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ပြီး အနာဂတ် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်တွင် တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ရေး၊ လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များ တပ်မတော်တွင် မည်သို့မည်ပုံ ပါဝင်ရေး တို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များက ပြောဆိုထားသည်။
ယင်းနောက် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများတွင် တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ထူထောင်ရန် လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များက တင်ပြခဲ့ပြီး အစိုးရကမူ တပ်မတော်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို အားလုံး ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၌သာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် အကြောင်းပြန်ကြားထားသည်။
Karen State Army must be Karen Army or KNLA. If we go the way Burmese Government said, one day when we need Karen soldiers you not gonna see anyone. KNLA+DKBA+KNU/KNLA= Karen country army..Karen Hero.. Do not forget Our Leader Saw Ba U Gyi four principle....
We are not fighting to become Ta Mer Taw (Burmese Soldier). We are fighting for change, for free down and we fighting to get our country back.
This word means as the same as the BGF. They would like to trick something for their goals and strategies. They would like all of the Liberated Armies to surrender and end the civil war without ethnic groups' rights.
smith black said...
To become only one Army foracountry is good. But What is the purpose behind his word? A real unity? Are they really moving inside the Law before they put ethnic arm members under the Law he mention? For sure, They want to vanish Ethnic Security by controlling Ethnic Arm Forces. ကိုယ်တိုင်ကဖြင့် ဥပဒေအထက် သမ္မတအပေါ်မှနေပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာ ၊ သူများကို ဘယ်ဥပဒေအောက်သွပ်သွင်းမှာလဲ
နိုင်ငံတော်ဥပဒေလား ၊ မင့်ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေထဲကိုလား
we never never trust those people.sorry.